Ku noqo maalgashiga SEO | Martech Zone
Jimcaha, Sebtember 9, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Faahfaahintan oo ka socota DIYSEO oo ku saabsan dib-u-habeynta mashiinka raadinta ee ku soo noqoshada maalgashiga ayaa laga yaabaa inay keento su'aalo ka badan inta ay dhab ahaantii ka jawaabeyso. Marwalba waan shakisanahay markaan arko bayaan buste ah oo ah in hal kanaal uu kafiican yahay inta kale oo dhan… sidii inaad ka tagto warbaahin kasta oo kale? Waa kuwan fiirinta qaarkood:
Tan si fudud ma looga qiyaasay hal olole? Si kale haddii loo dhigo… maaddaama ay cabbirayaan saameynta suuqgeynta iimaylka, ma waxay ku darayaan qiimaha noloshiisa macmiilka iyo iibsashada xigta ee ay waddada ka sameyn doonaan? Waxaan u maleynayaa inay taasi seegtay!
Iyada oo ku saleysan laba goobood, tani waa gabagabada dhammaan ganacsiyada? Waxaan u maleynayaa maahan!
Sidee buu u fiicnaa barnaamijkooda lacag-gujinta? Immisa jir buu ahaa? Muxuu ahaa dhibcaha xayeysiintu? Miyay ku xireen farriimo gaar ah oo gaar ah, beddelaad la hagaajiyay bogagga degitaanka si loo kordhiyo soo celinta?
Sidee tartan u ahaa ereyada ereyga muhiimka ah iyo intee in le'eg ayay qaadatay si ay u hesho shirkadda inay si fiican u darajooto?
Miyay maalgashiga SEO ku darsadeen kharashka dhammaan waxyaabaha, naqshadeynta iyo dhiirrigelinta goobta marka lagu daro si fudud u habeynta?
Shaki iigama jiro in SEO ay tahay inay ahaato qodob xukuma istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah oo internetka ah. Waqti ka dib, iyada oo la adeegsanayo hagaajinta goobta iyo kor u qaadista goobta, shirkaddu waxay si weyn u kordhin kartaa tirada hoggaamiyeyaasha, tayada hoggaamiyeyaashaas, waxayna wadi kartaa qiimaha halkii hogaamiye si loo yareeyo Soo-celinta Maalgashiga. IMO, hase yeeshe, sawir-gacmeedkani wuxuu dadka qaarkood u horseedi karaa gunaanad ka duwan.
Sep 11, 2011 at 12: 53 PM
Infographic infographic-ka waxaa la dhajiyay bishii Diseembar ee sanadkii 2009. In kasta oo aanan dhihi doonin in macluumaadku sax yahay ama uusan sax ahayn, haddana xogtu si dhaqso leh ayey suuqan uga dhex muuqataa sababo la xiriira isbeddelada iyo isbeddellada teknolojiyadda.
Warbaahinta Bulshadu waa hubaal inay saameyn ku yeelatay ROI laakiin laguma xareynin sawirkan.
Waa waqtigii la qaadan lahaa sawir kale oo isla xogtan ah oo la isbarbar dhigo. Lakabka saamaynta warbaahinta bulshada ee sawirka.
Sep 11, 2011 at 6: 27 PM
Fikrad weyn, Patrick! Waan ku raacsanahay - baraha bulshada ayaa hada raad ku leh natiijooyinka raadinta sidaa darteed natiijooyinka xitaa wey yara yara jajaban karaan.